मैले उनको हात सरक्क पञ्छाएर उनको अण्डरवेयर तल सारेँ । त्यहाँ देखिएको दृष्यले मलाई सखाप पारेको थियो । आन्टी …!’
एकनास बोलिरहेकी सुनितीका कुरा सुनेर कुनै सिनेमा हेरे झैँ भएर म लाटिएकी थिएँ । सुनिती बोल्न छोडेपछि म बिउँझिएझैँ भएकी थिएँ ।
‘नानू !’ मैले सुनितीको हात दह्रोसँग समातेकी थिएँ ।
‘आन्टी ! त्यहाँ केही थिएन आन्टी !’ ऋषभको अण्डरवेयरभित्रको ठाउँमा एउटा सानो प्वालमात्र थियो । त्यसपछिको समयमा मलाइ के भयो थाहा छैन । त्यसबेलाको अर्धबेहोसी अवस्थामा पुगेकी मलाई आफूले पहिरेको पारदर्शी नाइट गाउनको पनि हेक्का भएन, झन्नै अर्धनग्न अवस्थाकी म चिच्याउँदै आफ्नो कोठाबाट निस्केर सासूससुराको ढोका पिट्न पुगेकी थिएँ ।
आधारातमा म चिच्याएको सुनेर सासूससुरा दुवै एकैसाथ ढोका खोलेर मेरा सामू उभिएका थिए ।
‘के भो बुहारी, सपना नराम्रो देख्यौ ?’ सासूले मलाई अँगाल्न खोजेर सोधेकी थिइन् । ‘तपाईले किन मेरो जिन्दगीसँग खेल्नु भो ? तपाईको त्यस्तो छोरोसँग किन मेरो बिहे गर्नु भो ? तपाईँहरु पापी रै‘छ । भो मलाई यस्तो घरमा बस्नु छैन । मलाई नेपाल पठाइदिनुस । म भोलि नै फर्किन्छु । म सासूमाथि झम्टेकी थिएँ र मैले रुँदै, चिच्याउँदै भनेकी थिएँ ।
‘यस्तो दिन आउँछ भन्ने मलाई थाहा थियो सगुन ! तिम्रो जिद्धीले गर्दा यस्तो दिन पनि आयो । लौ अब आफ्नो शौखको नयाँ तमाशा हेर !’ ससुराले सासूलाई भनेका थिए ।
‘मलाई पनि के थाहा र यस्तो हुन्छ भनेर अनूप । लौन अब के गर्ने ?’ रुञ्चे श्वरमा सासू ससुराको आडमा पुगेर बोलेकी थिइन् । मेरो विभत्स रुप देखेपछि शायद सासू पनि डराएकी थिइन् ।
मलाई त्यसबेला लाज, डर, घिनको अर्थै थिएन । ममाथि सिङ्गै आकाश खसेको थियो । मेरो होस हवास सबै उडेको थियो ।
सासू मेरो सामना गर्न नसकेर कुन बेला कुन बेला त्यहाँबाट लुसुक्क भागेकी थिइन् । ससुराले मलाई पाखुरामा समातेर आफ्नो कोठामा भएको एउटा सोफामा बसालेका थिए ।
रोइरहेकी मेरा गालाको आँसु उनैले पुछेका थिए । म पुरै बेहोस हुने अवस्थामा पुगेकी थिएँ । बेहाल भएको मनस्थितिमा भएको मेरो शरीरसँग पनि मलाई त्यसबेला केही सरोकार थिएन । त्यसबेला अनुभवी मेरा ससुराले मलाई शान्त पार्न कलात्मकरुपले मेरा संवेदनशील अङ्गहरु समेत श्पर्श गरेका थिए । मैले पनि त्यसबेला उनका कुनै पनि क्रियाकलापप्रति कुनै वाधाविरोध गरेकी थिइन् । कतिवेरसम्म रुँदारुँदै त्यसरात त्यही सोफामा म एक झप्को निदाएछु क्यारे ।
म विउँझिँदा कोठामा कोही थिएनन् । एक्कै छिन निद्रामा परुञ्जेल सबै थोक विर्सिए पनि बिउँझिनासाथ विपनाको तीतो सत्यले मलाई पुनः थङ्थिलो पारेको थियो ।
म विस्तारै त्यस कोठाबाट बाहिरिएकी थिएँ । आफ्नो अर्धनग्न अवस्था थाहा पाउँदा त्यसबेला म आफैँलाई लज्जाबोध भएको थियो । म हातरहतार आफ्नो कोठामा पुगेँ । त्यहाँ ऋषभ थिएन । म वासरुम पसेँ । त्यहाँको डे«सिङ टेबुलको ऐनामा आफ्नो अनुहार मैले अर्कै देखेँ । हिँजोसम्म विजयको उन्मादले उन्मत्त आभा भरिएकी म आज पराजयको शिकार भएर लत्रक्क परेकी थिएँ । छविमा देखिएकी म स्वयम् मेरै लागि विरानो लाग्यो मलाई ।’
यति बोलेपछि सुनिती थाकेजस्तै गरी चुप लागेकी थिई । सुनितीको कथा सुनिरहँदा मलाई नै पनि मानसिकरुपले लामो यात्रा गरे झैँ थकाई लागेको थियो । मैले सुनितीका लागि पल्लो कोठामा भएको फ्रिजबाट ठूलो गिलासमा र आफ्ना लागि सानो गिलासमा जुश हालेर ल्याएँ । सुनितीले एकै सासमा जुश रित्याएकी थिई । मैले विस्तारै पिई रहेँ । उसको पीडाले मसमेत पीडित भएकी थिएँ । मलाई त्यसबेला उसको अनुहार हेरिरहन पनि गाह्रो भएको थियो ।
तर म आफू कथाकार र ऊ पात्र भएकै कारण पनि मलाई उभित्र खामिएको उसको कथा अझै पोख्न मन थियो ।
‘अनि ?’ मैले एक झल्को सुनितीको आँखामा हेरेर पुनः आफ्नो दृष्टि फेर्दै उसको कथाप्रति कुतुहलता व्यक्त गरेकी थिएँ । सुनिती केहीबेर बोलिन ।
‘त्यसपछि वासरुममै मैले आफूलाई बलियो बनाएर जसरी पनि आजै नेपाल फर्किन्छु भन्ने निर्णयमा पु¥याएँ । अनि आफ्ना आवश्यक सामाग्रीको साथमा लगेज तयार गरेँ ।
त्यसपछि चकमन्न त्यस घरमा मैले मानिसको खोजि गरेँ । तर त्यस घरमा कोही थिएन । भुतघरजस्तो घरमा सधैँ आउने न्यानी पनि थिइन ।
‘ सबैजना कता गए ?’ मैले आफैँले आफूलाई प्रश्न गरेकी थिएँ । त्यसैवेला मेरो मोबाइल बजेको थियो । पहिलोपटक स्थानीय नम्बरबाट मेरो मोबाइलमा फोनको घण्टी बजेको थियो ।
‘तिमी फ्रेस भयौ ? त्यहाँ डाइनिङ टेबुलमा तिम्रा लागि ब्रेकफास्ट राखिएको छ । खाऊ ।केहीवेरमा तिमीलाई लिन मेरो ड्राइभर आउने छ । उसैसँग तिमी मेरो अफिसमा आउनु । त्यसपछि जे गर्नुपर्छ हामी गरौँला !’
मैले केहीबेर उताको आवाज सुनेपछिमात्र चिनेकी थिएँ । ती ऋषभका पिता थिए ।
मलाई भोक बेस्सरी लागे पनि खाने ईच्छा थिएन । तर मैले नखाएर पनि आफ्नो उद्येश्य पुरा गर्न सम्भव थिएन ।
मैले बे्रकफास्ट सक्नासाथ डोरबेल बजेको थियो । डोरहोलबाट बाहिर हेर्दा आँगनमा गाडी र ढोकामा ड्राइभरजस्तै पोशाकमा गोरा नै थियो ।
त्यसपछि म उक्त गाडी र ड्राइभरका सहयोगले ऋषभका पिताको अफिसमा पुगेकी थिएँ ।अझै पनि मेरो मष्तिश्कले सहज भएर काम गरिरहेको थिएन । त्यसैले म ती गोरा ड्राइभरको पछिपछि मात्र हिँडिरहेकी थिएँ । हिँजोको आजै मैले आफूलाई एकदम फरक मनस्थितिमा पाएकी थिएँ । हिँजोसम्मको मेरो झल्मलाउँदो संसार एकदम अन्धकारमा परिणत भएको थियो । त्यस अन्धकारमा मैले आफु हिँड्ने बाटो पहिल्याउन पनि मलाई गाह्रो भइरहेको थियो । निकै ठूलै घरमा पु¥याएर लिफ्टमा समेत चढाउँदै ड्राइभरले नै मलाई बाटो देखाइरहेका थिए । अनूप एण्ड सगुन एसोसिएट्सको अफिस निकै ठूलो थियो । ड्राइभरले क्रमिकरुपले कोठा र प्यासेजहरु पार गराउँदै अन्ततः मलाई ढोकामा ऋषभका पिताको नाउँ लेखिएको कक्षमा पु¥याएको थियो ।
उक्त कोठाको ढोकाबाट मलाई भित्र छिराएर ड्राइभर वाई गर्दै विदा भएको थियो ।
‘कस्तो छ अहिले तिमीलाई सुनिती ?’ ऋषभका पिताले मन्द मुस्कानका साथ मलाई निकै आँखा गाढेर हेर्दै प्रश्न गरेका थिए ।
‘मेरो नेपाल फर्किने टिकटको व्यवस्था भयो ?’
अब मलाई यी मानिससँग कुनै शिष्टाचार राख्नु छैन भन्ने निर्णय गरेकी मैले उनको अनुहारमा कठोरता पूर्वक हेरेर प्रश्न गरेकी थिएँ । तिनको कुटिल मुस्कानमा मैले हिँजो राति उनीबाट मेरो संवेदनशील क्षेत्रमा गरिएको श्पर्श मुछिएको अनुभूति गरिसकेकी थिएँ । तिनको मप्रतिको नियत पनि गतिलो नभएको अब मलाई पूरै थाहा भइसकेको थियो । त्यसैले पनि ती व्यक्तिप्रति मेरो कठोर भाव प्रस्तुत भएको थियो । मेरो जीवन वरवाद गर्ने यी पनि एक अपराधी हुन भन्ने यथार्थले पनि मलाई उनीसँग सहज बनाउने कुरै थिएन ।
मेरो कठोर प्रश्नपछि पनि उनी भने सहजरुपले नै आपूm बसिरहेको घुम्ने कुसीबाट उठेर म बसेकै सोफा अघिल्तिर आएर बसेका थिए ।
‘हेर नानी, अब सबै कुरा तिम्रा सामु खुलिसकेको छ । तिमीले रिसाएर समय र आफ्नो उमेर पनि खराबनगर । हिँजोको तिम्रो व्यवहारले आत्तिएर सगुन र ऋषभ सिंगापुर गइसके ।’
तिनको यस जानकारीले घरको चकमन्नताबारे मलाईस्पष्ट पारेको थियो ।
‘अपराधीले भाग्नै पर्छ नि, के अनौठो कुरा भयो र ? भैगो मलाई अरुको कुराको के मतलब ? म आजै नेपाल फर्कन्छु । मेरो टिकट खोई ?’ मैले अलि झर्केरै भनेकी थिएँ ।
‘सुनिती, सगुनले पनि अपराधै गर्छु भनेर गरेकी त होइन, तर मोहजालले यस्तो बनाउन पुग्यो ।’ उनले भनेका थिए ।
‘तीस वर्षअघि हामी दुईबाटै सन्तान हुन नसक्ने मेडिकल रिपोर्ट आएको थियो । उक्त रिपोर्ट पढेपछि हाम्रो सुखका दिन सकिएको थियो । मैले त सगुनको अनुहार र अफिसको व्यस्तताले सन्तानमा खासै महत्व राखिन । तर सगुनलाई सन्तान चाहिएको थियो । नेपालबाट धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री ल्याउन सकिन्थ्यो । तर त्यस्ता अधिकांश धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीहरु हुर्केपछि आफ्ना मातापिताकै खोजिमा लागेको देखिएको थियो ।
‘ क्लोनिङ बेबी चाहिएमा सम्पर्क राख्नु होला’
त्यसै ताक सगुनको ईमेलमा कसैले एउटा विज्ञापन हालिदिएको रहेछ । त्यहाँ दिइएको फोन नम्बर र ईमेल ठेगानामा सम्पर्क राखेर सगुनले उक्त क्लोनिङ बेबी सन्दर्भका यावत कुराहरु बुझिछन् । त्यसपछि उनले उक्त बेबीका लागि अमेरिका जाउँ भनेर मलाई हुटहुटी लगाउन थालेकी थिइन् ।
‘कसैको हक पनि नलाग्ने, हामीले पैसा तिरेपछि हाम्रो हुने, हाम्रै लागि ती वैज्ञानिकले बेबी बनाएका रहेछन् । मेरो सपना विपना हुने भयो । हाम्रो पनि एउटा बच्चा हुने भयो ।प्लिज अनूप हामी छिट्टै जाउँ न । मेरो लागि तिमीले फेरि अरु केही गर्नु पर्दैन । यो एउटा बच्चा मेरा लागि किनिदेऊ ।’ सगुनको आग्रह दिनदिनै जिद्धीमा परिणत हुन थालेको थियो ।
हुँदाहुँदै सगुनले खान पनि छोडेकी थिई । भरखरै व्यापारमा केही अघि बढेको अवस्थामा त्यति धेरै पैसा तिरेर बच्चा किन्ने मनासायमा म थिइन । तर विस्तारै सगुन चाहिँ जीवनमरणकै सवालमा पुगेपछि मैले हारिदिएको थिएँ ।
त्यसपछि हामी अमेरिकाको न्यूयोर्क सिटीको निश्चित ठेगानामा भएको वैज्ञानिकको प्रयोगशालामा पुगेका थियौँ ।
समाचार सत्य थियो । विश्वमा पहिलो पटक सफलतापूर्वक उत्पादन गरिएको क्लोनिङ बेबी बिक्रीमा राखिएको रहेछ । तर हाम्रो दुर्भाग्य, परीक्षणका रुपमा उत्पादन गरिएकातीन ओटा क्लोनिङ बेबी मध्ये दुई बेबी बिक्री भइसकेका थिए । एउटा मात्र बेबी अब बाँकी रहेछ । सगुनले बेबी देख्नासाथ मोहित भएर बेबीलाई आफूसँग टाँसिसकेकी थिइन् ।
‘ यो बिक्रीको लागि होइन’
प्रयोगशालाको म्यानेजरले भनेको थियो । त्यसपछि हामी उक्त प्रयोगशालाका प्रमुख वैज्ञानिक म्यासेसँग भेट्न गयौँ । सगुनले आँखाभरि आँसु पारेर म्यासेसँग बेबी आफूलाई बेच्नका लागि अनुरोध गरेकी थिई ।
‘ यस बेबीमा प्रोडक्सन इरर छ । त्यसैले हामी यो बेबी बिक्री गर्दैनौँ । किनभने यस बेबीको सेक्सुअल अर्गेन छैन ।’
वैज्ञानिक म्यासेले जानकारी गराएका थिए । तर सगुनले उसका कुनै कुरा नै सुन्न मानिन । उ एकनास ‘बेबी मलाई देऊ ,मलाई बेबी देऊ’ भनेर रुन थाली ।
‘सगुन, म्यासेको कुरा ठीक हो, यस्तो बेबी किन किन्नु प¥यो । जिद्धी नगर । ’ मैले सगुनलाई सम्झाउने कोशिश गरेको हुँ ।
‘अनूप, मलाई यही बेबी चाहिन्छ ,मलाई उसको सेक्सुअल अर्गेन किन चाहियो र ? म तिमीसँग फेरि जिन्दगीमा केही माग्दिन, तिमीले जे भने पनि मान्छु । तिमीले मलाई किनिदिएका सबै गहना पनि सबै म तिमीलाई नै दिन्छु । रियल स्टेटको मेरो सबै शेयर पनि तिमीलाई नै फिर्ता दिन्छु । तर मलाई यो बेबी किनिदेऊ ।’ सगुनको एकोहोरो ढिपीमा ममात्र होइन, म्यासे पनि गलेका थिए ।
वैज्ञानिकले डिस्काउन्ट गरेर दिन्छु भनेको भए पनि मैले ऋषभका लागि गतिलै दाम तिर्नु परेको थियो ।
‘यो लिगल व्यापार होइन, त्यसैले यसको बील तपाईँहरुले पाउनु हुन्न । मेरो साथीको मेटर्निटी हस्पीटलबाट म वर्थ सर्टिफिकेट बनाउन लगाइदिन्छु । त्यसका लागि तपाईँहरुले थप अलिकति पैसा उक्त हस्पीटललाई तिर्नु पर्छ ।’
म्यासेले जे भने पनि मैले सगुनका लागि सबै कुरा सहजपाराले स्वीकार गर्नुको विकल्प मसँग त्यसबेला अर्को थिएन पनि । यो लोग्नेमानिस भन्ने जात स्वास्नीका अघिल्तिर किन यति कमजोर हुन्छ ? मैले कहिल्यै बुझ्न नसकेको कुरा यो, बुझ्यौ सुनिती ! स्वास्नीले रुँदै भनेपछि चाहिँदो नचाहिँदो जे कुरा पनि थप थप मान्ने जात हो लोग्ने भनेको । लोग्नेहरुको स्वास्नीका आँसुका अघिल्तिर विवेक भन्ने त हुँदै नहुने रहेछ, बुझ्यौ ? त्यसबेला सगुनका आँसुका धाराका अघिल्तिर मेरो पनि विवेक हराएको थियो । मैले नहुने कुरामा सगुनका सामुन्ने हारेका थिएँ । त्यसैले सगुनको सन्तुष्टिका अघिल्तिर मैले पैसाको मुख पनि हेरेको थिइन ।
यसरी सगुनले ऋषभलाई हाम्रा घरमा ल्याएकी थिई ।
ऋषभ सगुनको जीवनमा नआउञ्जेल सगुनले नानाथरीका रोगव्याधीहरु बोकेकी थिई । तर ऋषभ उसको जीवनमा आउनासाथ जादू भए जसरी उ चङ्गा हुन थाली । उ क्रमशः रोगहरुबाट मुक्त हुँदै गएकी थिई । ’
ऋषभका पापाको कुरा सुनेर म त्यसबेला केही बोल्न सकेकी थिइन । संसारमा यस्ता पनि घटना हुँदा रहेछन् भनेर म त अचम्म नै परेकी थिएँ ।
‘ यतिसम्म त ठिकै थियो, सुनिती ! मैले ऋषभको बिहे नगरौँ भनेर सगुनलाई धेरै सम्झाएँ । तर सगुनले फेरि अर्को जिद्धी समातेकी थिई । उसलाई ऋषभकी राम्री दुलही भित्र्याउने रहरले उद्युम मच्चाएको थियो ।
‘समस्या पर्छ, ऋषभ बिहे गर्न लायक छैन सगुन !’ मैले पटकपटक भनेको हुँ ।
‘नेपालको केटी बिहे गर्ने । सबै म सम्हाल्छु, तिमी केही चिन्ता नगर । तिमीले गर्दा मैले मातृत्व सुख प्राप्त गरेँ । म तिमीसँग जन्मजन्मसम्म अनुगृहित त छु नै । तर यत्ति ऋषभको बिहे गरी दिऊँ त्यसपछि म तिमीसँग केही माग्ने छैन ।’ सगुनले पुनः जिद्धी गरेकी थिई ।
म फेरि पनि पत्नीमोहमा परेँ । सुनिती ! अन्ततः यस अपराधमा म पनि सामेल भएँ ।’
त्यसबेला अनूपको स्वर साँच्चै आद्र भएको थियो आन्टी । एकैछिन मैले पनि आफूमाथि परेको बज्र विर्सेर उनको पीडालाई आत्मसात गर्न पुगेकी थिएँ । विवश लोग्ने मानिसको यो पीडाले कता कता मलाई आत्मसन्तुष्टि पनि दिन खोजेको थियो ।
अनूपले यो सबै कथाव्यथा मसँगै सोफामा टाँस्सिएर बसेर सुनाएका थिए । उनी मसँग अलि बढि नै टाँस्सिएको आभास भएपछि म त्यस सोफाबाट उठ्न खोजेकी थिएँ ।
‘बसन सुनिती, बस, हिँजो रातिको तिम्रो अवस्था देखेर मलाई निकै पीर प¥यो । एउटी युवतीको त्यस अवस्थालाई म महसुस गर्न सक्छु ।’ यसो भनिरहँदा उनले मेरा दुवै हात आफ्ना दुवै हातका वीचमा राखेर केही थिचेका थिए । मलाई उनको यो चर्तिकला ठीक लागेन । म उनीसँगैबाट जुरुक्क उभिएर अलिपर गएकी थिएँ ।
‘हेर्नुस, अब मलाई अरु कुनै कथा सुन्नु छैन । तपाई मेरा लागि नेपालको हवाई टीकटको बन्दोबस्त गरिदिनुस । म तुरुन्त नेपाल फर्कन चाहान्छु ।’
मैले अलि कठोर भएरै भनेकी थिएँ ।
‘ हेर सुनिती, तिमीलाई नेपालको टीकट लिइदिएर नेपाल फर्काउनु मेरो लागि ठूलो कुरा होइन, र तिम्रै लागि पनि यो ठूलो कुरा हुने छैन । तर तिमी नेपालबाट त्यस्तो धुमधामले बिहे गरेर आएकी हौ । अब एक्लै नेपाल फर्किएर कोकोसँग केके जवाफ फर्काउँछौ ? ठीक छ यहाँ तिमी ऋषभकी दुलही भएर अब नबस न , म तिम्रा लागि राम्रो जागीर, एपार्टमेन्ट र भेकलको व्यवस्था पनि गरिदिन्छु । हप्ताको छ दिन तिमी जोसँग जे गर मेरो तर्फबाट तिम्रो स्वतन्त्रतामा कुनै अवरोध हुने छैन । तर मसँग हप्तामा एक रात चाहिँ तिमीले बिताउनु पर्छ ।’
वाध्र्यक्य प्रवेश गरिसकेको व्यक्तिले मसँग यो कस्तो प्रस्ताव राख्दैछन् ? जसलाई उनैले पुत्रवधुका रुपमा सम्बोधन समेत गरिसकेका थिए, उसैसँग यो कस्तो सम्बन्धको आग्रह गरिरहेका छन् ?तिनको कुरा सुनेर मेरो मस्तिष्कले काम गर्न नसक्ने जस्तो भएको थियो । मेरो सारा शरीरमा दन्दनी आगो सल्केझैँ भएको थियो । मलाई तिनको अनुहारमै थुकिदिउँ झैँ भएर दिगमिग पनि लागेको थियो ।
‘छि… छोरी समान मसँग, हिँजोसम्मकी बुहारीसामु यस्तो घृणित प्रस्ताव राख्न तपाईँलाई शरम पनि लागेन ?’ म निक्कै कड्केर नै उनीसँग बोलेकी थिएँ । यसरी बोल्दा मेरो शरीर कामिरहेको थियो ।
‘सुनिती ! एउटी परिपक्व स्त्रीसँग अर्को परिपक्व पुरुषले सहमतीय समागमका लागि अनुरोध गर्नुमा शरम मान्नु पर्ने कुनै कारण छैन । स्त्रीपुरुष यौन सम्बन्ध भनेको सहमतीय हुनुपर्छ ।
चलिआएको सामाजिकता बिगारेर पशुवत रुपमा चौरमा बसेर मानवीय यौनक्रिया सम्पन्न गरिनु हुँदैन । चारपर्खालको बन्द कोठाभित्र यौनानन्द ग्रहण गर्न पाउनु मानवीय जीवनको उपलब्धि हो । पारम्परिक हिसाबले पुस्ता र वैज्ञानिक हिसाबले जीनभित्र सन्तानको जायजन्म हुनु वंशका लागि नै हितकर मानिँदैन । तर तिमी मेरी छोरी होइनौ न ऋषभ नै मेरो छोरो हो । अनि मानसपुत्र ऋषभद्वारा तिमीसँग शारीरिक सम्बन्ध पनि राखिएको छैन । अझ यौनको आकांक्षा पुरा हुन नसक्नाले विछिप्त भएकी तिमीसँग मैले हिँजो राति नै त्यस्तो सम्बन्ध राख्न सक्नु पथ्र्याे । तिम्रो आवश्यकता बुझेर पनि हिँजोको वातावरणमा मैले सामाजिकताको पालना गर्नु आवश्यक थियो । त्यसैले मैले हिँजो आफ्नो धर्म पालन गर्न सकिन । तिमी जीवन भोगाईको प्रारम्भिक अवस्थामा छौ ।कुरा बुझ्ने प्रयत्न गर सुनिती ! जुनसुकै सम्बन्ध भनेको पनि के हो र मात्र दिने र लिने त हो नि ! हरेक सम्बन्धका तरिका र शैली मात्र त फरक हुन्छन् !
हेर नानी, अझ म त व्यपारी मानिस हुँ । म संसारलाई व्यापारिकदृष्टिले नै हेर्छु र बुझ्छु पनि । मेरा लागि मानिसका हरेक सम्बन्ध भनेको सिर्फ व्यापार मात्र हो, फगत् व्यापार । त्यसबाहेक सबै आडम्बर !
मेरो विचारमा तिम्रो र मेरो वीच अब एउटा परिपक्व स्त्री र पुरुषको मात्र नाता छ । मलाई तिम्रो सौन्दर्यले परिपूर्ण यौवन रुचिकर भएकाले मैले तिमीसँग प्रस्ताव राखेँ । यसमा अन्यथा सोच्नुपर्ने कुरा अथवा शरम मान्नु पर्ने कुरा नै के छ र ? म शिष्ट र सभ्य तरिकाले आफूलाई मनपरेको कुरा तिमीसँगबाट किन्न चाहान्छु । मेरो सुझाव छ तिमी पनि अनावश्यक भावनामा नबगी समयले जुराएको यो स्वर्णीम अवसर र प्रकृतिले तिमीलाई भरिपूर्ण पारेको यसबेलाको रुप यौवनबाट सक्दो फाइदा उठाऊ । ’ वृद्ध खुलेरै बोलेका थिए ।
‘मलाई नेपाल आजै फर्किनु छ । मेरो टिकटको व्यवस्था गरिदिनोस् ।’ मैले निकै कठोरतापूर्वक फेरि पनि भनेकी थिएँ । वास्तवमा मलाई ती वृद्धको अनुहार हेर्न पनि मन लागेन ।
संसारमा यति निर्लज्ज मानिस पनि हुँदा रहेछन् भनेर मलाई ती वृद्ध अति नै घृणीत लागेका थिए । तर त्यसपछि उनले पनि केही भनेनन् ।
केहीबेर मै मेरा लागि टिकटको व्यवस्था भएको थियो । त्यसपछिआफ्नो पासपोर्ट, टिकट र लगेजका साथ म नेपाल फर्किएकी थिएँ ।’
अब सुनिती चुप लागेकी थिई । उसको अनुहार घनघोर वर्षापछिको आकाश झैँ उजेलिएको थियो ।
‘आन्टी, एउटा कुरा भन्छु है !’ सुनितीले अनुरोध भावमा भनेकी थिई ।
‘भनन् नानू भन !’
मैले उसको केश मुसार्दै भनेकी थिएँ ।
‘हजुर त कथाकार, तर मेरो कथा नलेखी दिनु है !’
मौन प्रतिउत्तरमा केवल उसको केश मुसारीरहेका मेरो हातले उसैगरी उसका केशराशी खेलाइरहेको थियो ।
मैले उसँग झुठो वाचा पनि त गर्न मिल्दैनथ्यो ।